शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०७ : ०८
जीवन परियोजनाको प्रिमोर्टम
कुनै व्यवसाय गर्दा होस्, कुनै परियोजनामा संलग्न हुँदा होस् अथवा कुनै विकास उन्मुख कार्य गर्दा होस् पोस्ट–मोर्टम विधि प्राथमिकतामा राखिन्छ। यहाँ परियोजना भन्नाले जीवनमा हासिल गर्न खोजिएको सबै कुरा जुन व्यक्तिगत साथै संस्थागत पनि हुन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ।
दुई महिनायता हङकङमा विरोध प्रदर्शन चर्किएर गएको छ। खासगरी जुलाई ४ मा चीनको तियानमेन चोकमा भएको नरसंहारको ३० औँ स्मृति दिवस मनाइसकेपछि हङकङमा त्यहाँ चीनको बढ्दो हस्तक्षेपविरुद्ध सानो जनमत प्रदर्शनमा थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू स्वस्थ रहेको र अझै २५ वर्ष बाँच्ने दावी गरे। उनको आयु त्यो भन्दा लामो होस्। तर संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकोक्रममा देखिएको दृष्य उनको दावीसँग मेल खाने देखिएन।
अधिकांश युवा भनौँ या व्यक्ति भनौँ या विद्यार्थीको शैक्षिक टाइमलाइन एकै प्रकृतिको हुन्छ। प्लस टु सकेपछि कतिपय विदेश जान्छन् त कतिपय स्वदेशमै संघर्षरत हुन्छन्। पढाइमा अब्बल हुनेहरुले विज्ञान संकाय छनोट गरेका हुन्छन्। र, उनीहरुले मुख्यतः दुईवटा विकल्प देखेका हुन्छन्। एक, चिकित्साशास्त्र। दुई, इन्जिनियरिङ।
काश्मिरसँग जोडिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गर्ने निर्णयलाई लिएर भारतीय जनता पार्टी र आरएसएसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सवैंधानिक प्रक्रिया र प्रावधानको कसरी उल्लंघन ग-यो र लोकतन्त्रको भावनामा ध्यान दिएन भन्ने बहस भइरहेको छ। तर अहिले यो बहसको अर्थ छैन।
भट्टराईको बदलिएको छवि
प्रतिस्पर्धी दलका समर्थकले पनि मन पराउने नेता हुन् योगेश भट्टराई। उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर पूरा नगर्दा नेकपाभित्रका उनका शुभेच्छुक जति दुःखी थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका युवा नेता कार्यकर्ता पनि दुःखी नै देखिएका थिए।
सरल र शालिन सभामुख मानिने कृष्णबहादुर महराले‘उद्घोषण तालिम’ लिने हुनु भएको छ। उहाँले सदनमा बोल्दा धेरै शब्दहरुको उच्चारण अस्पष्ट हुने गरेको क्यारिकेचर विज्ञहरुको भनाइपछि सभामुख स्वयम् यो निर्णयमा पुग्नु भएको हो।
संसद्का स्ट्यान्डअप कमेडियन
नेकपाका सांसद रामनारायण विडारीका कारण राष्ट्रिय सभाका सम्बोधनमा धेरैले चासो राख्छन्। चासो हुनुको कारण उनको रोचक सम्बोधन शैली नै हो। कानुन व्यवसायी हुँदै संविधान सभा र अहिले राष्ट्रिय सभामा मनोनित उनी झर्रो शब्दको प्रयोग गर्दै ठूल्ठूलो स्वरमा आफ्ना कुरा राख्छन्।
सन् १९५० मा भारतीय संविधानमा विशेष राज्यको दर्जा हासिल गरेको जम्मुकश्मिर र लद्दाखले सो दर्जा गुमाएका छन्। संविधानमा रहेको आर्टिकल ३७० लाई संशोधन गरी कश्मिर घाटी, जम्मु र लद्दाखलाई भारतअन्तर्गत राखिएको छ। यो भारतीय जनता पार्टीको पहिलेको नीतिअनुरुप नै कार्यान्वयन गरिएको हो।
राजनीतिक प्रहसनको पीडा
संयुक्त सरकार नै विकासको बाधक हो ठान्दै मतदाताले एकै दलको सरकार बन्ने म्यान्डेड दिए। निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादी निर्वाचन अगाडिको वचनमा पक्का देखिए र पार्टी एक गर्दै नेकपा बने। झन्डैझन्डै दुई तिहाईको बहुमतका साथ सरकार बन्यो। सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा एकै पार्टीको सरकार बन्यो।
नेपालमा दैनिक ६ वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यसको अर्थ, वर्षमा लगभग २२ सय बालबालिका तथा स्त्री बलात्कृत हुन्छन्। आँत कमाउन यही संख्या काफी छ।
अध्ययन कसरी गर्ने ?
अध्ययन अत्यावश्यक छ तर सबै मानिस अध्ययनशील भने हुन सक्दैनन्। अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ तर प्रक्रिया मिलिरहेको हुँदैन। जस कारण प्रायः विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्रमा छलाङ मार्न असक्षम हुन पुग्छन्। अध्ययन प्रक्रियामाथि प्रकाश पार्नु पहिले केही विषय वर्णन गरौँ।
सिंगापुरले सिकाएको पाठ
राजनीतिक तहबाट निराश आम नागरिकलाई खुसी बनाइरहेको क्रिकेटले यसपालि भने सोेचेजस्तो खुसी दिन सकेन। सिंगापुरमा टी–२० विश्वकपको एसिया छनोट खेलको प्रारम्भ हारबाट गरेको टोली बीचमा सम्हालिएको थियो।
अपेक्षाको उचित नापतौल
कुनै कार्य, योजना वा परियोजनामा संलग्न भएपछि अपेक्षा राख्नु नौलो कुरा होइन। एउटा संस्थामा केही वर्ष काम ग-यो, पारिश्रमिकमा बढोस् भनी अपेक्षा गरिन्छ।
अहिले नेपाली पोलिटिक्समा नयाँ भाइरल छाएको छ, सामन्त गोयलको। सामाजिक सञ्जालमा ज्यादै हिट भएका सामग्रीलाई भाइरल भनिन्छ। उनी सामाजिक हैन, राजनीतिक सञ्जालमा भाइरल छन् मस्तसँग। जताततै चर्चा छ उनको।
सम्झना, बिर्सना सलललल
कांग्रेसीले बिपी कोइरालालाई सम्झिएको दोस्रो दिन नेकपा सहितको कम्युनिस्ट जमातले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई सम्झिए। सामाजिक सञ्जालमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिइयो र उनीहरुले देखाएको बाटो पछ्याउने कसम खाए।
जुन देशमा प्रधानमन्त्री झुक्किन्छन्
देश कता जाँदैछ ? सम्पन्नता र समृद्धितिर कि अधोगतितिर ? कामकाज, चालचलन त समृद्धि आउला जस्तो छैन। सरकारले गरेका निर्णय, पारित गरेका ऐन, विधेयक कसका निम्ति हुन् ?
अरु कति निर्मला कुर्ने ?
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी अबोध किशोरी निर्मलाको बलात्कारी र हत्या पत्ता नलागेको साउन १० मा एक वर्ष टेक्यो।
स्ट्रिमिङ इज् कमिङ
जसै पृथ्वीनारायण शाहले फिरङ्गीले ‘हिन्दुस्थान’ निल्दै गरेको देखे, त्यसबाट जोगाउन नेपाललाई एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरे। अनि, जसै फिरङ्गीले सिन्धुली आक्रमण गर्ने तयारीका साथ कुच गरे, थाहा पाउने गोर्खालीले चिच्याउँदै जनाउ दिए– ‘फिरङ्गी आउँदो छ।’